Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Betty White dia nanome anay ny iray amin'ireo olon-dratsy tena tian'ny mampihoron-koditra ao amin'ny 'Lake Placid'
Tsy misy manao izany tsaratsara kokoa.
by Trey Hilburn III Janoary 2, 2022
by Trey Hilburn III Janoary 2, 2022 17,722 hevitra
Betty White dia harena. Mitohy ny asany Tovovavy volamena ihany no lehibe sy toerana mamirapiratra miredareda. Ny mpanao hatsikana dia nahavita nampitondra faisana sy fahazavana tamin'ny anjara asany tsirairay. Iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika nanao sarimihetsika na andian-tsarimihetsika tsara kokoa noho ny fanampiany fotsiny izy. Tale, ny biby an'i Steve Miner dia manafika ny fampihorohoroana, Farihy Placid dia nalaza be tamin'ny taona 1999. Na dia feno kintana toa an'i Oliver Platt, Bill Pullman ary Bridget Fonda aza izy io, ny tena kintana mamirapiratra amin'ilay sarimihetsika manontolo dia tena tsy manan-tsiny an'i White.
Raha tadidinao, Farihy Placid dia momba ny alligator mpamono olona ratsy fanahy izay nanjavona ny olona nanodidina ny Black Lake. Ny zava-drehetra momba ny gator sy ny fanjavonana dia mbola tsy nisy toy izany. Teo am-panadihadiana ny zava-tsarotra dia nampidirina ny iray tamin'ireo mponina tao amin'ilay farihy – ramatoa antitra sy mamy, Ramatoa Delores Bickerman.
Mazava ho azy, Bickerman dia manao fihetsika tranainy sy mamy. Mitahiry tsiambaratelo goavam-be izy amin'ny endriky ny behemoth amin'ny alligator mpamono. Hita fa Ramatoa Bickerman efa antitra no nitazona ny mpihinana tamin'ny alalan'ny fanakanana ny masony ny ombivavy mahantra ary nitarika azy ireo ho any amin'ilay biby goavam-be noana. Koa satria ny gator dia nohanina tsara nandritra ny androm-piainany manontolo, dia nitombo ho an'ny firaketana ny habeny miaraka amin'ny faniriana lehibe.
Bickerman dia nambara fa mpamono olona kely. Angamba noho ny firotsahan'ny akanim-borona tsy nisy na inona na inona izy, dia lasa natanjaka kely. Hita fa tsy nanome omby ho an'ny gators fotsiny i Bickerman. Soso-kevitra, nanome sakafo an'ilay gator somary mitovy habe amin'ny lehilahy izy.
White dia mamirapiratra amin'ny anjara asany amin'ny maha Bickerman azy. Ny ampahany rehetra amin'ny toetrany dia misy. Ny lafiny mamy, miaraka amin'ny lafiny masiaka sy masiaka izay nalaza tamin'ny hatsikana voalohany nataony. Mangalatra ny fampisehoana izy. Tsy asa mora ny mijery ilay sarimihetsika feno kintana sy gator goavambe ho boot. Nampihetsi-po sy nihomehy tanteraka ny mpihaino ihany koa i White rehefa naseho ny tena toetrany ary namoaka teny fanozonana izy. Ny mahita vehivavy antitra manozona toy ny tantsambo dia mahatsikaiky foana ary mihoatra noho ny fialamboly.
Ny toetran'i White aza dia mivoaka amin'ny marika lehibe. Nohanin'ny gator izay nohaniny nandritra ny taona maro izy. Ny fiafarany mangidy amin'ny toetra iray tian'ny mpankafy hatramin'ny fahafatesana.
Farihy Placid dia sarimihetsika mahazaka. Betsaka ny sarimihetsika 90 izay tsy mahazaka, fa ity iray ity. Indrindra indrindra, ny toetran'i White dia mitazona ary saika harena lehibe kokoa noho ny tamin'ny famoahana azy. White's Bickerman dia efa antitra toy ny divay. Divay manozona toy ny tantsambo ary mamahana ny entana.
Ny asan'i White dia nampiala voly sy nahatsikaiky foana. Vatana iray izay nampiakatra ny haavon'ny zavatra rehetra nataony. Farihy Placid dia sarimihetsika tsara kokoa noho ny Delores Bickerman. Tena mino aho toy ny sarimihetsika maro hafa izay nankasitrahan'i White tamin'ny fanatrehany, nisongadina ary lasa mihoatra noho ny fitambaran'ny ampahany fotsiny noho ny azy sy ny tsikiny.
Mety ho lasa i Betty White, fa ny sarimihetsika sy ny fahitalavitra tsy mampino dia mbola eto mba hihomehezana sy hitomany. Manoro hevitra aho manomboka amin'ny Farihy Placid Ny zavatra rehetra nataon'i White tamin'ny fikatsahana ny loza sy ny horohoro dia lehibe. Ho ela velona anie Rtoa Delores Bickerman.
Fotoana tonga lafatra hamerenana ny Lake Placid. Alefaso eto ny kopiao.